> Resource > Video > Video Watermark - Sida loo Watermark Video ah oo la Video ama Photo
Maalmahan, videos yihiin iyo aad u badan loo isticmaalo internetka shirkadda sida goodhiyaha, Casharrada, shay-baarka, iyo isbarasho dhacdo. Ku darista logo ah sida watermark ilaalin karaa copyright iyo caawiyaan hirgalinta brand aad sidoo kale.
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ma aha oo kaliya qalab ku haboon si ay u xaalkaa aad videos, laakiin sidoo kale mid ka mid ah qalabka software video watermark ugu wanaagsan ee la heli karo maanta. Marka laga reebo isticmaalaya image ah ma guurto ah sida logo ama watermark, waxay u saamaxdaa dadka isticmaala si ay u abuuraan video watermarks simly ay ku daray video ah oo la isticmaalayo Picture-in-Picture function Filmora ee. Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida ugu fudud in aad ku darto video ama image sida watermark video in Windows ah. Haddii aad tahay qof user Mac ah, isticmaal uun video ah editor Mac si isku mid ah loo gaaro.
Tallaabo 1: Ku dar video iyo watermark files barnaamijka
Waxaad sidoo kale riixi kartaa ah "Import" button on furmo suuqa hoose dooro files ka your computer, ama uun qabsadaan videos si toos ah u User in-barnaamijka ee Album aad webcam ama qalab kale oo video-qabashada. Tani software video watermark taageertaa dhammaan joogto ah iyo video file image qaabab, sida MP4, wmv, AVI, JPG, jpeg, BMP, PNG, JPG, iwm
Tallaabo 2: Ku dar video iyo watermark files si Timeline ah
Video asalka waa in uu ahaadaa on track video ah (track ugu horeysay ee waqtiga), halka clip video / sawirka kaas oo la shaqeeya sida watermark ah waa in la jiido iyo drooped gal track PIP ah. Markaas waxaad kordhin karaa muddada watermark ka mid ah sida ka soo jeeda video clip ee. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan tahay in laga lalmiyaa aad mouse qarkiisa ku dhamaaday ee clip watermark ilaa icon "arrow double" dulqabo muujinaysaa ilaa, ka dibna waxa uu jiidi in muddo la mid ah sida video asalka.
Tallaabo 3: U dheellitir watermark
By click double on clip watermark ah, aad u astaysto ay mooshin, booska, size, qaabaynta iyo sidoo kale ku daray ah xadka / hooskii, iwm waa in.
Dhaqdhaqaaqa : Dooro ka badan 30 nooc oo ah saamaynta mooshin si ay u sameeyaan watermark dhaceen. Waxaa jiri doonaa calaamad markii mooshin lagu darayaa watermark ah.
Sida Wacan : Ku qor mouse ku clip watermark oo ku soo jiidayo oo meel kasta oo uu furmo suuqa Xiisaha Leh.
Size : Ku jiid gacanta ku wareegsan clip watermark si ay u resize.
By tagay gujinaya ah "Advanced" tab, aad edit karaa maaskarada iyo saamaynta clips watermark ah.
Maaskaro : abuuro watermark la click bidix double mid ka mid ah qaababka. Dheellitir width image ama height.
Saamaynta : tab kuu oggolaanayaa in aad ku darto ah soohdinta, hooskii, isku shaandheyn, dhajisan oo ku darto saamaynta Alfa in aad watermark.
Talaabada 4: badbaadi watermarked videos
Markaad dhammayso Customization ee video watermark, guji "Abuur". Waxaad badbaadin karo watermarked videos in ku dhawaad ​​qaab kasta oo aad rabto adigoo gujinaya "qaab". Haddii aad rabto inaad la wadaagto aad videos on YouTube, si toos ah u tag tab YouTube iyo waxaa geliyaan watermarked videos. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa videos for Qalabka telefoonada gacanta iyo gubi in DVD ujeedooyin gurmad.
Talo : Ka sokow watermarks video, Filmora sidoo kale siisaa hawlaha kale video tafatir sida ku daray music soo jeeda, sawiro, saamaynta gaar ah, iwm